डिल्ली आचार्य काठमाडौं, ७ माघ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको गुट बजारमा अर्को भूकम्प नगए १२ माघमा प्रतिनिधिसभाले नेकपा नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुखको आसनमा राख्दै छ ।
गत १४ असोजमा बलात्कार अभियोग लागेर प्रतिनिधिसभाको गरिमामय सभामुख पद गुमाएका विवादास्पद नेता कृष्णबहादुर महरापछि अर्का विवादास्पद नेता सापकोटा प्रतिनिधिसभामा उदाउँदै गर्दा यसका राजनीतिक बाछिटाहरू भने रोमाञ्चक बन्दै जाने देखिएका छन् ।
बलात्कार अभियुक्त 'आउट' हत्या अभियुक्त 'इन'
एकताअघिको नेकपा माओवादी केन्द्रको विदेश विभाग हेर्थे कृष्णबहादुर महरा । महराले र एक जना चिनियाँ नागरिकसँग ५० करोड रूपैयाँ मागेको टेलिफोन वार्ताको अडियो सार्वजनिक भयो १८ भदौ, २०६७ मा ।
टेपमा प्रत्येक सभासदका लागि १ करोड रूपैयाँका दरले ५० जनाका लागि ५० करोड रूपैयाँ मागिएको दावससहित नेपाल वान टीभीले अडियो प्रसारण गरेपछि विवादमा आए महरा । यो विवादकै बीच उनी पटकपटक मन्त्री हुँदै सभामुख बने । सभामुखबाट बर्हिगमनमा पर्दा उनी बलात्कारको क्रुर अभियोगमा परे ।
महराको अन्य विवाद उल्लेख गरिरहन अब जरूरी छैन ।
अहिले चर्चा नेकपा नेता अग्नि सापकोटाको छ । सापकोटा यसअघि सञ्चार र वनमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
मन्त्री हुनै लाग्दा उनीमाथि अभियोग लाग्यो काभ्रेका अर्जुन लामालगायतको हत्या गरेको । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्‍याे । जाहेरी पर्‍याे र यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मात्रै यो विषयमा दुईवटा रिट विचाराधीन छ भने काभ्रे जिल्ला प्रहरी सर्वोच्चको आदेश लामो समयदेखि अटेर गरेर बसेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको सापकोटाको ज्यान मुद्दामा दुई सातापछि २२ (माघमा) संवैधानिक इजलासले यो हत्यासँग जोडिएको विवादमा सुनुवाइ गर्दै छ ।
सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आधार मान्दा पनि सापकोटाले विगतमा मन्त्री खान जानु र हाल सभामुखका रूपमा अघि सर्नु एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो ।
सापकोटा विरूद्ध दायर एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रष्टसँग कानुनको संरक्षण गर्ने व्यक्तिले आफूलाई पहिला कानुनसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भनेको छ ।
‘कानुनको संरक्षणको दाबी गर्ने व्यक्तिले पहिले आफूले कानुनसमक्ष समर्पण गर्नुपर्दछ । कानुन आफ्नो सुविधाका लागि उपयोग गर्ने र असुविधाको सम्भावना देखिएमा अनदेखी गरिने कुरा होइन । कानुन सदैव सर्वोपरि रहन्छ र यसको सर्वोपरिता हरअवस्थामा हरेक व्यक्तिबाट स्वीकार्नुपर्दछ’ (सुशील प्याकुरेलविरुद्ध झलनाथ खनाल, रिट नम्बर १०९४, पृष्ठ ६)
अदालतले भनेअनुसार सभामुखमा आसिन हुनै लाग्दासमेत सापकोटाले यो प्रकरणमा आफूलाई कानुनसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छैन । यस अर्थमा उनी व्यक्तिहत्याका शंकास्पद अभियुक्त हुन् ।
पार्टीकै नेताले हालेको मुद्दा विचाराधीन
माथि उल्लेख गरिएको अदालतको आदेशका रिट निवेदक हुन्, सुशील प्याकुरेल । प्याकुरेलले रिट दायर गर्दा पार्टी एकता भइसकेको थिएन । हाल प्याकुरेल राष्ट्रपति कार्यालयमा सल्लाहकारको भूमिकामा छन् भने अग्नि र उनको पार्टी पनि नेकपा नै हो ।
सभामुखको उम्मेदवार भएपछि अन्तरिम आदेशसम्मको सुनुवाइ भएर रोकिएको यो रिटमा प्याकुरेल सर्वोच्च अदालतमा अग्निको विपक्षमा उभिन्छन् कि मौन बस्छन् ? यो प्रश्नको बाछिटा नेकपा हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म अवश्य पुग्नुपर्नेछ ।
ओलीको हार कि कुटिल चाल ?
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको सभामुख पद फेरि त्यही खेमामा पुगेको छ ।
यो खेमामा पुग्दा पहिलो पटक नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान हारेको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले तत्काल जितेको भनिएको ‘सभामुख युद्ध’ लामो समय टिक्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विश्लेषकहरूको मत छ, ‘अग्नि सापकोटाको ज्यानमुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासपात्र सुवास नेम्वाङ र ओली खेमाकी नेतृ तथा गाउँले चेली शिवमाया तुम्बाहाम्फे दुवैलाई ‘व्याक’ गराएका हुन् ।
यो मतमा विश्वास गर्ने हो भने पनि अग्निको सभामुख यात्रा सजिलो छैन । उनको यात्रामा ओली, शिवमाया र नेम्वाङका बाछिटाले पछ्याइरहनेछ ।
अग्नि सापकोटा सभामुख बन्नु केहीअघि प्रचण्डले सशस्त्र विद्रोहमा मारिएका ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा आफू लिन तयार रहेको बताए । बाँकी १२ हजार नागरिक राज्यले मारेको उनको दाबी थियो । र, यो हत्याको जिम्मा राज्यका तर्फबाट लिनुपर्ने उनले बताए ।
राज्य सञ्चालनको अग्रासनमा अर्का अध्यक्ष ओली छन् । प्रचण्डकै अनुसार राज्यसत्ताका नायकका रूपमा ओलीले यो हत्याको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोग पक्कै पनि ओलीले अग्निकै नाममा पार्नेछन् ।
नेकपा नेताहरूले अग्निको सभामुखका रूपमा सहज जितको महसुस गरे पनि पार्टीमाथि एउटा नैतिक प्रश्न भने सधैं रहिरहनेछ ।
बलात्कार अभियोग लागेर बाहिरिएका सभामुखको आसनमा हत्या अभियोग लागेर धेरैवटा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई अघि सार्नुपार्ने बाध्यता पार्टीलाई कनि आइपर्‍याे ? यो जवाफ जनतालाई नेकपाले दिनुपर्नेछ ।
नेकपामा सापकोटाको विकल्प नभेटिनुको कारण पार्टीभित्रैका महिला नेतृहरू खोजिरहेका छन् । उपसभामुखका रूपमा नेकपा नेतृ शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजसंस्था फाल्नभन्दा पृतृसत्ता फाल्न गाह्रो भएको बताइन् ।
नेकपामा समस्या पितृसत्ताको हो कि पार्टीभित्र भावनात्मक एकताको अभाव पनि हो भन्ने बहस अब पार्टीभित्रै हुनुपर्ने माग युवा नेतृत्वले उठाइरहेका छन् । नेतृत्वले यसको जवाफ दिन सक्छ वा सक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।
र, यो आदेश कहिले कार्यान्वयन हुन्छ सापकोटाज्यू ?
अग्निलाई सभामुखकै रूपमा उभिइरहन सर्वोच्चकै एउटा आदेशले थप नैतिक संकटमा पारेको छ ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मानवअधिकारकर्मीका रूपमा नेकपा नेता सुशील प्याकुरेलले दायर गरेको रिटमा अर्जुन लामाको हत्या अनुसन्धानमा भएको प्रगति हरेक १५ दिनमा सर्वोच्चमा बुझाउन आदेश भएको छ ।
७ असार २०६७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश न अग्नि सापकोटाले पालना गरेका छन्, न काभ्रे प्रहरीले ।
१० वर्षदेखि शक्तिको पहुँचमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिइएको यो आदेशको अवहेलना अभियोगमा अग्नि सापकोटा र काभ्रे प्रहरीविरूद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भए उनीमाथि अर्को अभियोग थपिनेछ, सभामुख अभियुक्तका रूपमा ।
सापकोटाज्यू ! संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा यस्तो उल्लेख छ–
कानुनको शासनको सर्वोपरिता, मानवअधिकारको आधारभूत मूल्य र मान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने भएकाले पूर्णिमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सोसमेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा प्रस्तुत गर्नू भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेतका विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम यो आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिएको छ । यो रिट निवेदनलाई पेशीमा अग्राधिकार दिई नियमानुसार गर्नू । इति संवत् २०६८ साल असार ७ गते रोज ३ शुभम्...।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ७, २०७६, ०१:०३:००
मुटु जलिरहेछ प्रधानमन्त्रीज्यू !